Horizontal Retort Machine Nemvura Inokanganisa Maitiro Ekudzosera homwe
Anoshanda Maindasitiri Ekugadzira Chigadzirwa, Chikafu & Beverage Fekitori Mushure meWarranty Service Vhidhiyo rutsigiro rwehunyanzvi, Hapana sevhisi, Rutsigiro rwepamhepo, Zvikamu, Spare yekugadzirisa uye basa rekugadzirisa Nzvimbo Yemunharaunda Nzvimbo Hakuna Showroom Nzvimbo Hapana Mamiriro Nzvimbo Itsva Yekutangira Shandong, China Zita reBrand Shenlong Voltage yakagadziriswa Simba kumusoro kudzosera saizi Kurema kusvika kudzosera saizi Dimension (L * W * H) kumusoro kudzosera saizi Certification ISO, CE Warranty 1 Year Mushure -kutengesa S ...
Mamiriro Nyowani Anoshanda Maindasitiri Ekugadzira Chigadzirwa, Chikafu & Beverage Fekitori Mushure meWarranty Service Vhidhiyo rutsigiro, Rutsigiro rwepamhepo, Zvikamu, Spare kugadzirisa uye kugadzirisa basa Yemunharaunda Service Nzvimbo Viet Nam, Indonesia Showroom Nzvimbo Viet Nam, Indonesia Nzvimbo Yekutanga Shandong, China Zita reBrand. Shenlong Type Kubika Midziyo garandi 1 gore Mushure mekutengesa Sevhisi Yakapihwa Munda kumisikidzwa, kutumira uye kudzidzisa Mashandiro eminda Cannery, ...
otomatiki mvura inokonzeresa kutapudza kudzora kwechikafu chemumagaba uye chinwiwa indasitiri
Mvura Cascading Retort / Autoclave ndeyekuti mvura inonaya pamusoro pechigadzirwa package kuendesa kupisa, iyi mhando yekudzosera inokodzera tinplate magaba, mabhodhoro egirazi, mabhodhoro epurasitiki, nezvimwe.
Kupisa Kutengesa Mvura inopisa Mvura Retort Sterilizer Autoclave Mutengo WeKugadzira Chikafu Retort ndiyo michina inoshandiswa kutapudza yakaderera-asidhi chikafu chemumagaba, tembiricha inopfuura 100 ℃ uye pasherufu hupenyu hwave pamusoro pemwedzi mitanhatu. tembiricha yekudzorera uye nguva yakatarwa zvinoenderana nechigadzirwa chako. 1.Redu kudzosera zvinhu: shandisa SS304 kana 316, kudzosera flanges nemisoro yataishandisa ndiyo yepamusoro mhando muChina. 2.Control system: SIEMENS inodzora sisitimu inovimbisa kuti vatengi vanogona nenguva kuwana cheni yekupa munyika ...
Kupisa kutengesa kwekutengesa chikafu retort sterilizer autoclave yehove dzemumagaba
Retort ndiyo michina inoshandiswa kutapudza yakaderera-asidhi chikafu chemumagaba, tembiricha inopfuura 100 ℃ uye pasherufu hupenyu hwave pamusoro pemwedzi mitanhatu. tembiricha yekudzorera uye nguva yakatarwa zvinoenderana nechigadzirwa chako. Zvivakwa zvedu zvakashongedzwa zvakanaka uye kugona kwakanyanya kwemhando pamatanho ese ekugadzira zvinoita kuti tivimbise kugutsikana kwevatengi kweIOS Chitifiketi China Steam Spray Retort Sterilizer Autoclave yeGirazi Jar, Zvino isu takawedzera bhizinesi redu diki kuGerman, Turk ...